Shina mivelatra amin'ny alàlan'ny valizy vavahady Conduit ho an'ny orinasa sy mpamokatra API6A Standard | Cepai
Mivelatra amin'ny alàlan'ny valizy vavahady Conduit ho an'ny Standard API6A
Ny valizy vavahady WKM mahazatra dia mifanaraka amin'ny API 6A fanontana farany faha-21, ary mampiasa fitaovana mety amin'ny serivisy samihafa arakaraka ny fenitra NACE MR0175.
Fanitarana vavahady vavahady
Valin'ny vavahady WKM an'ny CEPAI, famolavolana feno, manala amin'ny fomba mahomby ny fidinan'ny tsindry sy ny Vortex, mampiadana ny fametahana poti-javatra matevina ao anaty tsiranoka, vavahady valizy misy rafitra famehezana mekanika, izay tsy mitaky tsindry tsiranoka sy fampisehoana famehezana tsara, fihenan'ny tora-pasika mandritra ny fisokafana ary ny fiasa akaiky, ary ny fiakanjoana kely eo anelanelan'ny vavahady sy ny seza, ny vy amin'ny vy eo anelanelan'ny bonnet sy ny vatana, ny tombo-kase malefaka na ny vy amin'ny tombo-kase vy eo anelanelan'ny vavahady valizy sy ny seza valizy, mitsindroka tombo-kase amin'ny alàlan'ny valizy fanindronana indraindray mba hanatsarana ny asan'ny famehezana ny miditra tsimoramora
Ny vavahady manitatra dia ampiasaina amin'ny Series NW sy RWI Gate Valves. Ity famolavolana vavahady malaza ity dia ampiasaina amin'ny valves-tanana mba hamokarana hery ambony hipetraka manoloana ny seza ety ambony sy ny any ambany rehefa mihamafy ny handwheel. Ity hery ity dia miteraka tombo-kase mekanika tery izay tsy misy fiantraikany amin'ny fiovan'ny tsindry na ny hovitrovitra. Ny vavahady miitatra dia mamela tombo-kase mekanika tsara manerana ny seza roa, na ho any ambony na ho any ambany, miaraka na tsy misy tsindry tsipika. Ny fivorian'ny vavahady dia mampiasa tarehin'ny vavahady angular izay nianjera nandritra ny dia nataony. Rehefa mikatona, ny fijanonana amin'ny vatana dia miteraka fivezivezena any ambany kokoa hanery ny tarehin'ny fivorian'ny vavahady ivelany hisy fiatraikany amin'ny tombo-kase mikoriana tsara. Rehefa nosokafana izy, ny fijanonan'ny bonnet dia mitarika ny diany mankany ambony kokoa hanery ny tarehy ambany hanitatra sy hamehezana ny seza hanasaraka ny fikorianan'ny vatan'ny valan'alika.
◆ Casting vatan'ny valizy
◆ Fanakatonana tsara miverimberina
□ Fanamaivanana ny vatana ivelany
Anarana Fanitarana vavahady vavahady
Model Valizy vavahady WKM
Pressure 2000PSI ~ 10000PSI
savaivony 1-13 / 16 "~ 7-1 / 16"
Valve vavahady WKM an'ny CEPAI, izay fitaovana ho an'ny vatana dia Casting (A487GR9 NA A487-4C), dia natao ho an'ny lohataona solika sy gazy voajanahary, ny karazana seza dia azo amboarina sy hitsinkafona, ny fonosana dia ampiasaina amin'ny fampiharana avo lenta.
Previous: Valantsary sôkôla vita amin'ny tànana ivelany
Manaraka: Valve vavahady ampiasain'ny Hydraulika
Valin'ny vavahady Allen
Valin'ny vavahady roa
Valve avo vavahady avo
Valin'ny vavahady Piv
Valve vavahady amoron-drano